Imiyalo - Hengtai (Hong Kong) share Co., Ltd.
1.Izixwayiso ezisetshenziselwa i-LCD module
1-1Isixwayiso Sikagesi Oqinile: Izenzo ezilandelwayo kumele zenziwe ngaphambi kokuvula noma ukulungisa noma ukufeza i-LCM:
Ukugqoka i-anti-static isihlakala sebhande.
Ukugqoka izingubo zokulwa.
Iphansi le-anti-static lingasetshenziswa, ikakhulukazi endaweni yokushisa eyomile nephansi [umswakama ophansi] imvelo.
Ukuze usebenzise isitsha esine-anti-static.
1-2 Cisha inkinobho yamandla ngaphambi kokufaka, ukukhipha noma ukufaka i-LCM.
1-3 Ukugwema inkinga ye-EMl, sicela uxhume kahle i-LCM entweni esebenza ne-EMC ukuvikelwa.
1-4Umehluko kufanele ulungiswe esimeni esifanele nge-VR uma i-LCM iqhutshwa ebangeni eliphakeme le- izinga lokushisa.
I-1-5 lt ingcono ukuba ne-heater eyakhelwe ngaphakathi ku-LCM ukuthuthukisa isivinini sokubonisa ngezansi izinga lokushisa.
1-6 Ukugwema ukunwaya i-LCD, sicela ungayisusi ifilimu evikelayo ngaphambi kokufaka i-LCM.
1-7 Sicela ugcine indawo esebenza kahle ukuze uvikele i-LCM ezinhlayiyeni ezingcolile.
1-8 Sicela ungayivuli i-LCM uma yehlulekile, lokho kungathinta ukucutshungulwa kokuhlaziywa.
1-9 Ukuzwela nge-ultraviolet gwema ukusetshenziswa noma ukuvezwa ngaphansi kwelanga ngaphandle kokuthi kusebenza ku-ultraviolet.
1-10 Uma udinga ukwandisa i-PIN noma ikhebula eligobekayo eligobekayo lapho usebenza, sicela unakekele insimbi umphumela, njenge-short-circuit noma i-welding embi.
Ukuqapha okusetshenziselwa imodyuli ye-OLED
2-1-1Vimbela ukusebenzisa ukushaqeka okweqile kumodyuli noma ukwenza noma yiziphi izinguquko noma ukuguqulwa kuyo.
2-1-2.Ungenzi izimbobo ezingeziwe ebhodini lesifunda eliphrintiwe, shintsha ukwakheka kwalo noma ushintshe izingxenye zemodyuli yokubonisa ye-OLED.
2-1-3 Musa ukuqaqa imodyuli yokubonisa ye-OLED.
2-1-4 Ungayisebenzisi ngaphezu kwesilinganiso esiphezulu ngokuphelele.
2-1-5 Musa ukulahla, ukugoba noma ukusonta i-OLED module yokubonisa.
2-1-6 Ukuthengisa: kuphela kumatheminali we-IO.
2-1-7Sitoreji: sicela ugcinwe esitsheni sikagesi sokulwa no-static nemvelo ehlanzekile.
2-1-8 Kuhle kakhulu ukusebenzisa "Isilondolozi Sesikrini" ukunweba isikhathi sempilo futhi Ungasebenzisi ukulungiswa ekwakhekeni isikhathi eside ekusetshenzisweni kwangempela.
2-1-9 Ungasebenzisi imininingwane engaguquki kuphaneli ye-OLED isikhathi eside, lokho kuzolungiselela "ukushiswa kwesikrini" isikhathi somphumela.
I-2-1-10 Winstar inelungelo lokushintsha izinto zokwenziwa, kufaka phakathi u-R2 no-R3 adjust (Resistors, capacitors nezinye izinto zokwenziwa zizohluka ukubukeka nombala obangelwa i-suupplier ehlukile.)
I-2-1-11 Winstar inelungelo lokushintsha i-PCB Rev. (Ukuze wanelise ukuzinza okuhlinzekwayo, ukwenziwa kokuphathwa nokusebenza okuhle kakhulu komkhiqizo ... njll, ngaphansi kwesisekelo sokuthi cha okuthinta izici zikagesi nobukhulu bangaphandle, iWinstar inelungelo lokuthi shintsha uhlobo.)
2-2 Ukuphatha Izinyathelo Zokuqapha
2-2-1 Njengoba iphaneli yokubonisa yenziwa ngengilazi, ungasebenzisi imithelela yemishini efana nathi ukwehla esikhundleni esiphakeme.
2-2-2 lUma ifasitelana lokubonisa! yephuka ngengozi ethile futhi into yangaphakathi yemvelo iyavuza, qaphela ukuthi ungadonseli noma ukukhotha into ephilayo.
Ukucindezelwa kusetshenziselwa indawo yokubonisa noma indawo yakhona yemodyuli yokubonisa ye-OLED, isakhiwo secellcell singalimala futhi uqaphele ukuthi ungasebenzisi ingcindezi kulezi zingxenye.
I-polarizer emboza ingaphezulu lemodyuli yokubonisa ye-OLED ithambile futhi iklwebekile kalula.Sicela uqaphele lapho uphatha imodyuli yokubonisa ye-OLED.
2-2-5 Lapho ingaphezulu le-polarizer yemodyuli yokubonisa ye-OLED inenhlabathi, hlanza indawo. It isebenzisa ngokunenzuzo ukusebenzisa iteyipu yokunamathela.
I-Scotch Mending Tape No. 810 noma okulingana nayo
Ungalokothi uzame ukuphefumulela endaweni engcolile noma usule ubuso usebenzisa indwangu equkethe i-solvent
njenge-ethylalcohol, ngoba ingaphezulu le-polarizer lizoba namafu. Futhi, naka
ukuthi uketshezi kanye ne-solvent elandelayo kungonakalisa i-polarizer:
2-2-6 Bamba imodyuli yokubonisa ye-OLED ngokucophelela lapho ufaka i-OLED module module ku- Uhlelo lwezindlu. Ungasebenzisi ukucindezela ngokweqile noma ingcindezi kumodyuli yokubonisa ye-OLED phezu kokugoba ifilimu ngezakhiwo zephethini ye-electrode.Lezi zingcindezi zizothinta ukubonisa Futhi, vikela ukuqina okwanele kwamacala angaphandle.
2-2-7 Musa ukufaka ingcindezi kuma-chip e-LSI nasezigabeni ezibunjiwe ezizungezile.
2-2-8Ungahlukanisi noma uguqule imodyuli yokubonisa ye-OLED.
2-2-9 Ungasebenzisi amasiginali wokufaka ngenkathi amandla engqondo evaliwe.
2-2-10 Naka ngokwanele izindawo zokusebenza lapho unikeza ama-OLEDdisplay modules ukuvimbela ukuvela kwezingozi zokuqhekeka kwezinto ngogesi we-static.
Qiniseka ukuthi wenza isisekelo somzimba womuntu lapho uphatha amamojula wokubonisa we-OLED.
Qiniseka ukuthi usebenzisa amathuluzi womhlabathi wokusebenzisa noma ukuhlanganisa okufana nezinsimbi ze-soldering.
Ukucindezela ukukhiqizwa kwamandla amile, gwema ukwenza umsebenzi womhlangano ngaphansi komile izindawo.
Ifilimu evikelayo isetshenziswa ngaphezulu kwephaneli yokubonisa yesibonisi se-OLED Qaphela ngoba ugesi ongaguquguquki ungakhiwa lapho ukhipha ifilimu evikelayo.
Ifilimu yokuvikela eyi-2-2-11 isetshenziswa ngaphezulu kwephaneli yokubonisa futhi isusa ifayili le- ukuvikela ifilimu ngaphambi kokuyihlanganisa.Ngalesi sikhathi, uma imodyuli yokubonisa ye-OLED ibikhona okugcinwe isikhathi eside, izinsalela zokubambelela kwefilimu yokuvikela zingahlala ebusweni bephaneli yokubonisa ngemuva kokususwa kwefilimu. Esimweni esinjalo, susa okusele impahla ngendlela evezwe eSigabeni 5 esingenhla.
2-2-12. Uma amandla kagesi esetshenziswa lapho imodyuli yokubonisa ye-OLED isuswa noma lapho ikhona ibekwe ngaphansi kwezindawo ezinomswakama ophakeme, ama-electrode angashiswa futhi aqaphele gwema okungenhla.
3 Izinyathelo Zokuqapha
3-1 Lapho ugcina amamojula wokubonisa we-OLED, uwafake ezikhwameni ezivimbela ugesi ezimile ukuvezwa yilanga eliqondile noma izibani zezibani ezibengezelayo. futhi, futhi, ukugwema okuphezulu izinga lokushisa kanye nomswakama omkhulu imvelo noma izinga lokushisa eliphansi (ngaphansi kuka-0 ° C) izindawo.
I-Note1: Uma i-pixel noma amaphutha we-sub-pixel amancane eqa ama-50% we-pixel ethintekile noma indawo engaphansi kwe-pixel, kuthathwa njengokukhubazeka okungu-1.
Qaphela2: Akufanele kube khona ukungafani okuhlukile okubonakalayo nge-5% ND Filter ngaphakathi kwamasekhondi amabili izikhathi zokuhlola.
I-Note3: I-Mura nechashazi elikhanyayo lihlolwe nge-5% yokudlulisa i-ND Filter njengokulandelayo.